special - Synonyms of special | Antonyms of special | Definition of special | Example of special | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for special
Top 30 analogous words or synonyms for special
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအဖွဲ့ Co-ordinator, Myanmar Language SIG (Special Interest Group),
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများ (၂)ခု - Special Administrative Regions (特别行政区)
Mobil ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် Mobilgas နှင့် Mobilgas Special တို့ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို Mobil Regular နှင့် Mobil Premium အဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်ဝေလိုက်ပြီး အမှတ်တံဆိပ်အမည်ကို မှတ်သားရလွယ်ကူသော "Mobil" အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သည်။
ကမ္ဘာ့စာပို့လုပ်ငန်းသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စာပို့တိုက် သမဂ္ဂ၏ အထူး ရန်ပုံငွေ(Special Fund)ကို ၁၉၆၆ တွင စတင်ပြဋ္ဌာန်းရာ အဖွဲ့ဝင်များက စေတနာအလျောက် ထည့်ဝင်သည်။ အထူးရန်ပုံငွေဖြင့် စာပို့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို ငွေထောက်ပံ့မှု ပြုသည်။
ဘီ-၂ ကိုယ်ပျောက်ဗုံးကြဲလေယာဉ် Both during development and in service, there has been considerable importance placed to the security of the B-2 and its technologies. Staff working on the B-2 in most, if not all, capacities have to achievealevel of special-access clearance, and undergo extensive background checks carried out byaspecial branch of the Air Force.
မွန်ဘုကဂကုရှို့ အထူး နည်းပညာ ကောလိပ်ကျောင်းသား (Special training college students)။ ။ အသက် ၁၇ နှစ် နှင့် ၂၂ နှစ် ကြား ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ပညာသင်ကြားသက် ၁၂ နှစ် ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ပတ်ချန်ရိုး (အဆိုတော်) ဘရူနိုင်းဒါရူဆလမ်တွင် ရုပ်ရှင်ရိုတ်ကူးစဉ် ဘရုနိုင်းကို လည်ပတ်ခဲ့သည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် "Last Hunter" ဆိုသည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းသည် "The Law of The Jungle - Hidden Kingdom Special in Brunei" ၏ OST ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ဟောင်ကောင် နှင့် မကာအို တို့သည် ဗြိတိသျှ နှင့် ပေါ်တူဂီ တို့၏ ကိုလိုနီ မဖြစ်ခင်က ကွမ်တုန်းပြည်နယ်၏ အစိပ်အပိုင်းများ ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါ ယင်းတို့သည် အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (special administrative regions - SARs) များ ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒေသတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာများတွင် ကွမ်တုန်းပြည်နယ်မှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုနိုင်ပေ။
တင်မောင်၊ ဒေါက်တာ ၁၉၅၂ မှာ ၁၉၅၆ အထိ ဥပစာသိပ္ပံမှ ဒုတိယရသည်။ သင်္ချာဂုဏ်ထူးတန်းကို ထူးချွန်စွာ တက်ရောက်ခွင့်ရသည်။ ၁၉၅၆ ခု အောက်တိုဘာလတွင် လန်ဒန်တက္ကသိုလ်၌ ဂုဏ်ထူးတန်း တက်ရောက်သည်။B.Sc (Special) သင်္ချာကို ပထမတန်းဂုဏ်ထူး First Class Honours ဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။